Umrhwebi wencwadi: Imbasa yeSixeko saseCartagena yeNoveli yeMbali | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | 03/04/2022 01:48 | Ababhali, Iincwadi, Inoveli
Luis Zueco ibinzana
Umrhwebi wencwadi yimbali eyonwabisayo ngumbhali waseSpain uLuis Zueco. Umsebenzi wapapashwa ngo-2020 kwaye ukuza kuthi ga ngoku unamahlelo ali-12 kwaye uguqulelwe kwisiPhuthukezi nesiPolish. Emva kwempumelelo yokusungulwa kwayo, ngo-2021 yaphumelela ngamxhelo mnye i-XXII yeSixeko saseCartagena imbasa yeMbali yeNoveli.
Umbhalo ubonisa uhambo olungaqhelekanga lukaThomas Babel, umJamani osemncinci owanyanzeleka ukuba ashiye yonke into ukuya kutshona kwiYurophu egungqiswa ziziganeko ezibini ezikhulu: ukufunyanwa kwelizwekazi laseMelika kunye nokuyilwa komatshini wokushicilela. Uhambo luzele yimbali, intandabuzo kunye nobuqhetseba, kunye neengcebiso zothando kunye noburharha, umxube othi, nangona usetyenziswe ngokuqhelekileyo kwinkalo yoncwadi lwangoku, ujikelezwe kakuhle ngumbhali.
1 Isishwankathelo soMrhwebi weNcwadi
1.1 Uthando lokuqala
1.2 Baleka ushiye yonke into ngasemva
1.3 uhambo kunye neencwadi
1.4 Umrhwebi kunye nekhomishini engaqondakaliyo
3 Abanye abalinganiswa abanomdla
3.1 Thomas Babele
3.2 UMarcus Babele
3.3 UFerdinand Columbus
4 Malunga nombhali, uLuis Zueco
4.1 ukulungiswa kobungcali
4.2 Amava omsebenzi
4.3 Uhlanga loncwadi
4.4 Umsebenzi kaLuis Zueco
Isishwankathelo se Umrhwebi wencwadi
UThomas wayehlala eAugsburg -isixeko sakho sokuzalwa- kunye noyise, uMarcus Babel, owayephethe inkathalo yakhe ukususela xa wayeneminyaka emithandathu ubudala, ukususela ngoko Umama wakhe usweleke. Ixesha elide, intloko yentsapho isebenze njengompheki kwindawo yokuhlala yebhanki ecebileyo, uJacobo Fugger.
Ngexesha lombhiyozo obalulekileyo kwikhaya likaFugger, uMarcus wanikwa umsebenzi wokulungiselela iindwendwe isidlo esikhulu. Yathi iqala intlanganiso, UTomas Walungiselela ukwabelana nabanye abantu abatsha, kwaye, emva kwemizuzwana embalwa, Wabalekela kwelinye inenekazi elihle elithe kwangoko layiba intliziyo yakhe: Úrsula.
Umrhwebi weNcwadi ...
Baleka ushiye yonke into ngasemva
Emva kokuba isidlo sangokuhlwa siphelile, isiganeko esingalindelekanga satshintsha kakhulu uxolo kunye nobudlelwane obukhoyo: ummi ohloniphekileyo wabulawa yityhefu. Ngokukhawuleza, kwaye ngaphandle kobungqina, wonke umntu watyhola uMarcus ngoko kwenzekileyo. Ngenxa yokufa okubuhlungu kunye nokumangalelwa ngokungafanelekanga, uTomas kwafuneka ashiye isixeko ngokukhawuleza ukuze asindise ubomi bakhe.
Ngaphandle kokuthandabuza, U-Úrsula unike lo mfana uncedo. Noko ke, leyo yindlela ababeceba ukubaleka ngayo kunye, babengamaxhoba omgibe kwaye kwafuneka bohlukane. Ngenxa yoko, uTomas kwafuneka aqhubeke ebaleka yedwa, eshiya ngasemva uyise kunye nothando lwakhe lokuqala.
uhambo kunye neencwadi
Lo mfana waseJamani waqala uhambo oluya emazantsi e-Italiya ekhatshwa ngumrhwebi weencwadi, iwayini kunye nezinye izinto. Uhambo lwakhe lwaluhlala luphantsi komthunzi wokungcatshwa, ngoko ke ubomi bakhe baba yinto yokubaleka rhoqo. Emva kwexesha elide, le ndlela yamkhokelela eAntwerp, apho wafumana umsebenzi kumzi wokushicilela.
Xa usenza lo msebenzi -kutsha nje ngelo xesha- wafunda konke awayenako waza wathanda iincwadi, amaphepha nevumba le-inki kuye. Ihlabathi lamagama lamtsala kakhulu kangangokuba lamkhokelela ekubeni achithe ixesha lakhe efunda iitekisi ezininzi.
ikhaya lakho elitsha, ngaphezu kokuvula iingcango zendalo entsha yolwazi, wamvumela ukuba azibone ngokusondeleyo zonke iinguqulelo eziphawulekayo oko kwakusenzeka kulo lonke yaseYurophu.
Umrhwebi kunye nekhomishini engaqondakaliyo
Imihlaba ephakathi eSeville
Emveni kwexeshana, UTomas Kwafuneka aqhubeke nohambo lwakhe wafudukela emantla eSpeyin. Pha wadibana noAlonzoumrhwebi weencwadi apho waqala ukusebenza. Ngenye imini, bobabini bafumana isabelo: khangela incwadi. Ukuze bafumane indawo ekubhalwe kuyo lo mbhalo, kwafuneka baye eSeville ngenkulungwane ye-XNUMX, isixeko esasikhwankqisayo nesasigquba selona thala libalulekileyo eNtshona: iLa Colombina—eyayilwa ngunyana kaChristopher Columbus—.
Ngokumangalisayo, ukusuka kwiishelufa zaseLa Colombina Baye bayiba incwadi eyayifunwa nguThomas noAlonso. I-atmospheric yendawo igcwele imfihlelo kunye nobuqili: ngenxa yesizathu esithile, umntu akafuni ukuba bayifumane kwisicatshulwa.
Umrhwebi wencwadi yinoveli intsomi yembali eSeville ekuqaleni kwenkulungwane ye-XNUMX. Umsebenzi uye Amaphepha angama-608, ahlulwe abe ziibhloko ezisi-7 ezinezahluko ezingama-80. Isicatshulwa sibaliswa ngu a umbalisi owaziyo yonke into ngendlela elula nemnandi.
Abanye abalinganiswa abanomdla
Nguye protagonista zembali. Umfana onengcinga, ophucukileyo, ofundileyo nonephupha. Ubomi bakhe buyatshintsha emva kokubulawa kukayise, ngoko ke kufuneka abaleke kwidolophu yakowabo. Ekubalekeni kwakhe, ufunda ubugcisa bokushicilela, uthabathekile, ubandakanyeka kuthotho lweemfihlakalo kwaye ubomi bakhe buguquka ngonaphakade.
Nguye Uyise kaThomas. Umpheki ozinikeleyo nentloko yentsapho ezincamayo. Wayala unyana wakhe esemncinane kakhulu ngombono wokukhangela imihlaba emitsha yeSiqithi esidumileyo se-Essences.
Unyana kaChristopher Columbus. Yayiyibhibliyografi kunye ne-cosmographic kwaye waba nethamsanqa lokukhapha uyise kuhambo lwakhe lwesine oluya eMelika. Wanikela ngexesha kunye nemali yakhe ekuqokeleleni eyona ngqokelela inkulu yeencwadi ngelo xesha, ngaloo ndlela eyila iBiblioteca La Colombina. Wabhala ibali lokufunyanwa nguyise, ngaloo ndlela eqinisekisa ukungafi kwezibakala.
Malunga nombhali, uLuis Zueco
ULuis Zueco Gimenez wazalelwa eZaragoza ngowe-1979. Wakhulela kwidolophu yaseBorjas, apho wayedlala khona kwiinqaba zakudala, nto leyo eyamenza wathanda ulwakhiwo lwamaxesha aphakathi. Omnye woomalume bakhe—owayengumkhuseli welifa lemveli—wayemxhasa kulo msebenzi wokuzonwabisa.
Izifundo zakhe zokuqala eziphezulu zenziwa kwiYunivesithi yaseZaragoza, phi uphumelele kwi-Industrial Engineering. Ngombulelo kulwazi alufumeneyo, wakwazi ukubuyisela nokubuyisela izakhiwo ezininzi zamandulo kunye neenqaba zamaxesha aphakathi. Emva koko, ufumene isidanga se-bachelor kwiMbali kwiDyunivesithi yeSizwe yeMfundo eDistance. Emva koko, wenza iMasters kuPhando lwezoBugcisa kunye neMbali kwifakhalthi enye.
Okwangoku, usebenza njengoMlawuli weHotele iCastillo de Grisel kunye neNqaba yaseBulbuente, zombini ibekwe eTarazona de Aragón. I-Aragonese iphinde ibe ngumdibanisi kwimidiya eyahlukeneyo, njenge-Aragón Radio, i-Cope, i-Radio Ebro kunye ne-EsRadio. Ukongeza, uhlela njengomhleli weendwendwe kwi I-Archaeology, iMbali kunye nephephancwadi lokuHamba kwihlabathi eliphakathi.
Waqala umsebenzi wakhe njengombhali ngenoveli Ukuphuma kwelanga okubomvu eLepanto (2011). Emva konyaka, wazisa Inyathelo 33 (2012), umsebenzi obalaseleyo ophumelele amaBhaso aMazwe ngaMazwe Inoveli yembali IsiXeko saseZaragoza 2012 kunye neBest Historical Thriller 2012. Ngo-2015, wapapasha inqaba, umsebenzi owaqala I-Trilogy yamaXesha Aphakathi, series eyaqhubeka nge Isixeko (2016), kwaye yaphela nge Iemonki (2018).
Ngo-2020 wasungula UMrhwebi Weencwadi. Esi sihloko sifumene ukwamkelwa okukhulu luluntu kunye nabahlalutyi boncwadi. Lilonke, umbhali uvelise iinoveli ezisi-8 kunye nencwadi esihloko sithi Iinqaba zeAragon: iindlela ze-133 (2011). Upapasho lwakhe lwamva nje lwenziwa ngo-2021: UGqirha Wotyando lwemiphefumlo.
Umsebenzi kaLuis Zueco
Ukuphuma kwelanga okubomvu eLepanto (2011)
Inyathelo 33 (2012)
Umhlaba ngaphandle kokumkani (2013)
Indlu yeemonki (2018)
umrhwebi weencwadi (2020)
UGqirha Wotyando lwemiphefumlo (2021)
Iinqaba zeAragon: iindlela ze-133 (2011)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Umrhwebi wencwadi
Uhlengahlengiso olongezelelekileyo lukamabonakude: Ukufikelela, aMahashe aSlow kunye neLifa leBosch
I-Countess yaseSegure kunye neentsomi zakhe